Tag: gurguurto | Martech Zone
5 Arrimood oo Xasaasi ah SEO ayaa lagu ogaadey Boodhadh
Monday, May 6, 2013 Jimcaha, Agoosto 30, 2013 Douglas Karr
Weligaa miyaad guurguuratay boggaaga? Waa istiraatiijiyad weyn in lagu xalliyo arrimo qaawan oo qaawan oo ku saabsan bartaada oo aanad ogaan karin. Saaxiibbada wanaagsan ee Istaraatiijiyadda Goobta ayaa noo sheegay oo ku saabsan Qaylo-dhaanta Riyaha ee SEO Spider. Waa guurgure fudud oo bilaash ah oo xaddidan oo ka kooban 500 bog gudaha ah… ku filan inta badan bogagga internetka. Haddii aad ubaahantahay waxbadan, iibso liisanka £ 99 ee sanadlaha ah! Runtii waan ku qanacsanahay sida ugu dhakhsaha badan ee aan u baari karo goob iyo